Akụkọ - 2021 Honda CRF300L na CRF300L American Rally kwupụtara
Dika Dennis Chung, nwoke si Honda na Toronto, kwuputara mgbe Honda Europe kwuputara ozi a na mbido onwa Disemba, ugbo ohuru nke mmadu abuo nke ohuru nke Honda ga-abanye ahia US. N'ezie, Honda kwuru na CRF bụ egwuregwu kacha ere ahịa abụọ na ụlọ ọrụ ọgba tum tum.
Site na CRF300L na CRF300L Rally ọhụrụ, ọrụ a bụ ịbawanye ike, belata ịdị arọ ma melite arụmọrụ na-apụ apụ? "Na-enweghị ịhapụ uru, ntụkwasị obi na ọdịdị ọdịdị, ụkpụrụ ndị a, uru na ntụkwasị obi a ekerela òkè dị mkpa na igwe na-ewu ewu." Ọ bụ ezie na anyị ghọtara na igwe abụọ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọrụ, ma e wezụga maka ike mmanụ, na mgbakwunye na ọdịiche dị n'etiti ihe nchekwa ọkọlọtọ na windo windo nke ụgbọ ala ahụ, anyị na-etinyekwa nkwupụta mgbasa ozi zuru oke nke Honda maka ụdị abụọ a n'okpuru.
A na - enweta ike ọzọ na torque site na ịbawanye mwepụ site na 15% - site na 250 ruo 286 cc yana meziwanye arụmọrụ n'okporo ụzọ site na ịba ụba nkwonkwo nkwonkwo na nkwụsị ala. N'otu oge ahụ, Honda kwuru na mkpokọta ụgbọ ala ka nke 11 pound belatara, nke a na-enwetakarị site na iji nyocha nke kọmpụta iji kwado mbadamba efere na tubing nha na ọtụtụ ihe. The styling Atụmatụ si Honda si CRF Performance usoro, mgbe MSRP bụ ka “asọmpi.”
Site na aru ya na uhie, ocha, oji na acha anụnụ anụnụ, CRF300L bu n'uche i imitateomi ọdịdị nke usoro CRF Performance, tinyere Baja dabeere na CRF450X.
Ọnọdụ ndị na-agba ịnyịnya agbanweela ọnọdụ ịnya ịnyịnya iji meziwanye ntinye onye na-anya ya na njem ụgbọ ya. Ikuku oke nke aka ahụ na-abawanye iji mee ka ọnọdụ ikpere ụkwụ dịkwuo mma, na-eduzi ya dị mfe, na ibu nke aka ahụ na-abawanye iji belata vibration. Obosara nke azụ na etiti mpaghara nke oche ahụ ka dị otu iji nọgide na-enwe nkasi obi, ebe akụkụ dị n'ihu dị gịrịgịrị iji melite ntinye ndị na-agba ịnyịnya site na apata ụkwụ na ikpere. A na-emegharị mkpị ụkwụ ụkwụ azụ, wee si otú a mee ka ọrụ ụkwụ nke mgbatị na ntụgharị ụkwụ dị mfe, na emegharịla aka nri mkpuchi rocker aka azụ iji belata obosara. A na-enyekwa nko ụgbọ njem ndị njem.
Mita Mita ohuru nwere oji oji na ocha ocha, ihe odide a buru ibu 6 mm iji meziwanye visibiliti. Na mgbakwunye na ọsọ, elekere na rpm agụ, atụmatụ ọhụrụ agbakwunyere, gụnyere ọnọdụ gia, kilomita njem na oriri mmanụ. Ejikwa mita ahụ belata site na pọd 0.01.
Sistemụ engine / nnyefe malitere site na CRF250L, Honda gbanwere mmiri ọkụ na-eme ka otu ihe na-arụ ọrụ nke nwere okpukpu anọ, na-amụba strok site na 8 mm (ngụkọta 63.0 mm), ebe ọ na-echekwa cylinder dayameta nke 76.0 mm agbanweghi agbanwe. Nke a rụpụtara mmụba 36cc na mwepụ, maka ngụkọta nke 286cc, nke mere ka aha gbanwere CRF300L. Igwe pistin toro ogologo na-abawanye ike na torku n'ogologo ọsọ niile.
Na mgbakwunye, camshaft agbanweelagogogogo na oge iji mee ka mmepụta na mpaghara ala nke ọsọ ọsọ, nke a na-ejikarị eme njem na ịnya ụgbọ ala.
A haziri ihe oriri / ikpochapu ikuku ikuku ka ọ gbanwee iji jide 38 mm nnukwu ahụ ọkụ ma tinye usoro ihe mkpocha ọhụrụ na isi ọkụ na ihe mkpuchi-ọ bụ ezie na Mbelata ụda na-apụta site na njikwa mmajijiji. Ejikọtara, mgbanwe ndị a nwere ike melite njikwa nchịkọta, ọkachasị na obere revs.
Dị ka ọ dị na mbụ, usoro valve nke injin ahụ na-agbaso usoro ihe eji eme ihe iji nweta isi nke cylinder, ebe onye na-emezi ihe nwere ike ịrụ ọrụ dị mma.
Emegharịrị gear gear nke gearbox ọsọ ọsọ isii na 2021. Ebe dị anya n'agbata ọsọ ọsọ pere mpe pere mpe, ebe dị anya na ọsọ ọsọ buru ibu, nke mere na enwere ike ịme nhọrọ gia kacha mma ebe ị ka na-enweta ahụ iru ala nnukwu ọsọ. irughari. Nke a na - eweta ezi nguzo n’etiti itinye ihe n ’obodo ukwu. , Ngwa ogologo na ngwa-ụzọ.
The ipigide na e toro maka ya ipigide ipigide. Ihe nlere anya a gha enwe ihe nfe (ihe dika 20%) na 2021, site na nkwado ohuru inyeaka / nke na-adighi nma, nke na-enye oru oma karie oge oru.
Chassis / nkwusioru Ọ bụ ezie na injin ahụ dị ike karị, usoro nke ọtụtụ ihe dị iche, nke na-ebelata ịdị arọ nke ụgbọala ahụ. Dịka ọmụmaatụ, a na - ejizi aluminium dị ala karịa nke aluminium kama nke nchara, ọ na - ebelata 0.1 lb. Nke a abụghị naanị na ọ na - ebute ike nchịkwa, mana n'ihi na ibu ibu na - apụta nke ukwuu n'ụgbọ ahụ, etiti nke ike ndọda dịkwa ala.
Site na ịkachasị isi ihe dị na etiti ahụ, a na-ebelata ịdị arọ nke etiti ahụ site na pọds 0.3, ebe ike mpụta na-ebelata site na 25%, wee si otú a na-emeziwanye ngagharị na mmetụta nke ndị bi na ya: a na-agbada tube ala site na 30 mm; na ala tube gusset Nta; ọkpọkọ isi dị 20 mm mkpụmkpụ; a na-ebelata dayameta nke ọkpọ stent site na 3.2 mm ruo 25.4 mm.
Tụkwasị na nke ahụ, nyochagharị na etiti ahụ na imepụta crankcase emeela ka nnweta ala dị sentimita 1.2, wee si otú a belata ohere nke nnyonye anya mgbe ị na-anya ụgbọala n'okporo ụzọ na-adịghị mma.
Ihe nkwado ahụ siri ike ma nwee ike iguzogide ịgbagọ, ihe mgbakwasị ụkwụ ya ugbu a 10% buru ibu iji melite nkwụsi ike ụgbọala mgbe ị na-adọba ụgbọala.
Ogwe aka nke azụ dị ka etiti ahụ, na mpụta na mpụta ụkwụ nke ogwe aka azụ na-ebelata 23% na 17%, n'otu n'otu. Obosara dị n'akụkụ pivot belatara site na 15 mm, yana akụkụ obe nke ọgbakọ a gbanwere iji nyekwuo nkesa nke ntụgharị, na-eme ka enwe mmetụta dị mma ma nwekwuo amụma. A na-ebelata ịdị arọ nke ogwe aka rocker site na 0.08 pound-na-ebelata ịdị arọ nke oge opupu ihe ubi, si otú a na-emezi ihe nkwụsịtụ.
Nkwụsịtụ Dị ka e kwuru na mbụ, nkwusioru ahụ gụnyere ndụdụ Showa nke 43mm na-agbanwe agbanwe na usoro Pro-Link otu ujo n'azụ. Otú ọ dị, a gbatịwo ọrịa strok ahụ, ihu na ụkwụ ụkwụ azụ bụ sentimita 10.2, mmụba nke 0.4 sentimita asatọ na .6 sentimita, n'otu n'otu. Emegharịrị ntọala ahụ ma jiri njikọ njikọ na njikọ ọhụrụ ejiri rụọ ọrụ. The jikọtara N'ihi na mma nkwusioru arụmọrụ, karịsịa n'oge anya-ụzọ ịnya.
A na-eji brekị arụ ọrụ tupu ya emechaa na breeki ya. Ndị rotors nwere ihe ntụgharị 256 na 220 mm n'otu n'otu, yana ABS dịnụ, nke nwere ike ijikwa ijiri braking n'ọnọdụ dị iche iche. Yiri imewe eji na CRF Performance usoro, ọhụrụ n'azụ breeki nna ukwu cylinder ka a kwadebere n'ụzọ na mmanụ ụgbọala. Nke a na-echekwa mkpa ijikọ mmiri mmiri dịpụrụ adịpụ na sooks e mepụtara na mbụ, na-ebute ọdịdị dị ọcha. Na-adaba, ABS nwere ike ịgbanyụ n'azụ iji nye mmetụta dị iche iche na ọnọdụ-ụzọ.
Uzo ndi ozo bu otu igwe di elu. Ogologo wiil ndị ahụ dị sentimita iri abụọ na anọ maka wiil ndị mbụ na sentimita 18 maka wiil ndị ahụ. Ha nwere ike ịmịpụ nwayọ na ala siri ike. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ihe atụ 2020, agba ojii aluminom na-egbu maramara, nwere ọdịdị na-egbu maramara, ọ dịkwa mfe ihicha.
Ihe na-adị n'azụ azụ dị obere n'akụkụ ụfọdụ ma nwee obere mkpọchi (M8 karịa M10), nke na-azọpụta pọọlụ 0.04. Azụ axle dị ugbu a bụ oghere ma kpụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 0.03 pound.
Ngwa Honda na-enye ọtụtụ ngwa, gụnyere ndị nche aka, efere mgbochi skid, sockets ike, obosara, igbe ndị dị elu, racks, wdg.
Ezubere CRF300L Rally iji kpoo onyonyo nke Ricky Brabec na-emeri CRF450 Rally nke Dakar Rally. Ọ dabere na ọkọlọtọ CRF300L mana o nwere ikike mmanụ ụgbọ mmiri buru ibu, nchekwa aka yana windshield mebere ya, na-eme ka ọ dị mma maka njem dị anya na-enweghị N'ihe efu nke agility, na CRF300L rally nwere nnukwu mmanụ ụgbọ mmiri ma tụọ 9 pound na njem nke obodo mepere emepe na ọbụna n'okporo ụzọ. Ihe na-erughị ihe nlereanya gara aga, ngbanwe a mụbara site na 15%, si otú a na-abawanye ike na ọnụọgụ, na-eme ka ọhụụ dị ogologo karịa karịa mgbe ọ bụla.
Nlereanya Na 2021, ndị na-emepụta Honda nakweere nnọkọ CRF250L dị ugbu a iji mee ka ọ dịkwuo egwu, gbasaa tank mmanụ site na 25% (lita 0.7 maka ngụkọta nke galọn 3.4, nke kachasị na klas ya). N'ịtụle akụ na ụba mmanụ ọkụ nke ihe nlereanya a, CRF300L nwere oke dị oke na ule nke ihe karịrị 250 kilomita.
Dị ka igwe na-agba ọkụ na ụlọ ọrụ Monster Energy Honda, azụ dị larịị, nke na-eme ka ọ dịrị onye na-agba ya mfe ịkwaga ma lekwasị anya n'ihu nke ụgbọ ahụ. Anya na-acha uhie uhie, ọcha, nwa na-acha anụnụ anụnụ na-egosipụta ọdịdị nke usoro CRF Performance.
Belata ibu nke ọtụtụ akụkụ, gụnyere fenda n'ihu (belata 0.02 pound), ihe mkpuchi n'akụkụ (belata 0.05 pound), igbe ngwá ọrụ (belata 0.03 pound) na mpempe akwụkwọ ikike ikike (belata 0.04 pound).
Ọnọdụ ịnya ịnyịnya nọ n'otu oge ahụ, agbanweela ọnọdụ ịnya ịnyịnya iji meziwanye ntinye onye na-agba ịnyịnya na ịnyagharị ụgbọ ala. Iji mee ka ikpere aka guzosie ike, sterịn ahụ na-adị ọkụ, ike na-azacha ike na-abawanye, tinyekwa ibu abụọ (5.8 ounce ọ bụla) iji belata ịma jijiji, na roba na-agbakwunye ụkwụ ụkwụ maka otu ihe kpatara ikpo okwu . Oche ahụ na-eji mpempe akwụkwọ roba ọhụrụ. N'iji ya tụnyere ụdị ọkọlọtọ, obosara ya abawanyela site na 20 mm ruo 190 mm, ọ bụ ezie na ihu dị warara ka ụkwụ onye na-agba ya wee kpọtụrụ ala mgbe ọ dị mkpa. Nko nko njem bu ngwa oru.
A na-emegharị mkpị ụkwụ ụkwụ azụ, wee si otú a mee ka ọrụ ụkwụ nke mgbatị na ntụgharị ụkwụ dị mfe, na emegharịla aka nri mkpuchi rocker aka azụ iji belata obosara.
Mita Onye igwe oji ohuru ohuru nwere oji oji na ocha ocha ma ihe odide bu 6 mm buru ibu iji meziwanye visibiliti. Na mgbakwunye na ọsọ, elekere na rpm agụ, atụmatụ ọhụrụ agbakwunyere, gụnyere ọnọdụ gia, kilomita njem na oriri mmanụ. Ejikwa mita ahụ belata site na pọd 0.01.
Injin / usoro ntinye malitere site na CRF250L. Honda gbanwere mmiri ọkụ na-eme ka otu osisi na-arụ ọrụ okpukpu anọ, na-amụba ọrịa strok ahụ site na 8 mm (ngụkọta 63.0 mm), ma na-ahapụ agba nke 76.0 mm agbanweghi agbanwe. Nke a rụpụtara mmụba 36cc na mwepụ, na ngụkọta nke 286cc, nke mere ka aha gbanwere CRF300L Rally. Igwe pistin toro ogologo na-abawanye ike na torku n'ogologo ọsọ niile.
Site na ichota ihe ndi bu ihe eji eme ya, ogwe aka nke ogugu di ala site na 25%, nke na eme ka obi di nma na onye na-acho, na-eme ka ihe ozo di ala site na 0.3 pound: a na-eme ka tube di ala site na 30 mm; mgbada tube Gusset pere mpe; ọkpọkọ isi dị 20 mm mkpụmkpụ; a na-ebelata dayameta nke ọkpọ stent site na 3.2 mm ruo 25.4 mm.
Otu nkedo aluminom na-agbanye ogwe aka na-eme ka njirimara kachasị mma, na mpụta na mpụta ihu na-ebelata site na 23% na 17%, n'otu n'otu. Obosara dị n'akụkụ axis belatara site na 15 mm, ma a gbanwewo akụkụ obe nke akụrụngwa iji nyekwuo nkesa nke mgbagwoju anya, na-eme ka enwe mmetụta dị mma na njikwa a na-ahụkarị. A na-ebelata ịdị arọ nke ogwe aka rocker site na 0.08 pound-na-ebelata ịdị arọ nke oge opupu ihe ubi, si otú a na-emezi ihe nkwụsịtụ.
Nkwụsịtụ Dị ka e kwuru na mbụ, nkwusioru ahụ gụnyere ndụdụ Showa nke 43mm na-agbanwe agbanwe na usoro Pro-Link otu ujo n'azụ. Uzo nke ihu ihu na n'azụ bu 10.2 sentimita asatọ na 10.4 sentimita, n'otu n'otu.
Ihe na-adị n'azụ azụ dị obere n'akụkụ ụfọdụ ma nwee obere mkpọchi (M8 karịa M10), nke na-echekwa kilogram 0.03 nke ibu. Akụkụ azụ dị ugbu a bụ oghere, na-ebelata nsị ọzọ site na 0.02 pound.
Ngwa Honda na-enye ọtụtụ ngwa, gụnyere ntọala ike, spikes sara mbara, ejiri aka ọkụ, igbe dị n'elu, racks, wdg.
Bụrụ onye nyocha nke Motorcycle.com. Buru ụzọ denye aha na ala anyị ebe a ka ị nweta akụkọ banyere ọgba tum tum anyị kachasị ọhụrụ.